ဝိုင်ဖိုင်နဲ့ Android OS5.1 14.9-86 လက်မစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူဘား LCD Display ကိုဒစ်ဂျစ်တယ် sigange ဆနျ့တနျးတရုတ်နယူးထုတ်ကုန် | SYTON
ခေါက်နိုင်သော ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆိုင်းဘုတ်
“L” အမျိုးအစား အိတ်ဆောင်
အပူချိန်တိုင်းတာမှုဖြင့် မျက်နှာကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း။
ဘတ်စ်ကား မျက်နှာကျက် တပ်ဆင်ထားသည်။
နယူးထုတ်ကုန်ဝိုင်ဖိုင်နဲ့ Android OS5.1 14.9-86 လက်မနှင့်အတူဘား LCD Display ကိုဒစ်ဂျစ်တယ် sigange ဆနျ့တနျး
0.9405 (H ကို) * 0.9405 (V)
AC အ 110V-240V, 50 / 60HZ
1 နှစ် warrantya fter ပေးပို့
အီး / CCC / FCC သည် / ROHS / ISO9001
ဘား LCD Display ကို
တစ်လလျှင် 6000 Piece / ပိုငျးပိုငျး
Advertising ကြော်ငြာကစားသမား / ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်များသောအားဖြင့်သစ်သားအမှုနှင့်ကာတွန်းကိစ္စတွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။
ရှန်ကျန်း, ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်
အရေအတွက် (ပိုငျးပိုငျး) 1 - 40 > 40
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (ရက်) 20 ညှိနှိုင်းရမည့်
LCD ကို Panel ကို Size ကို 19 "
display Box ကိုအရွယ်အစား (စိတ်ကြိုက်) outline: 49,4 × 12,62 × 1.64cm
bezel ဧရိယာ: 47,4 × 9.76cm
Active ကိုဧရိယာ: 47,3 × 9,66 စင်တီမီတာ
panel ကိုအရွယ်အစား 15 19 24 28 38 44
LCD ကို resolution ကို 1920x388p
Visual ထောင့် 85 Down / Up ကို / ညာ°လက်ဝဲ /
အရောင်အဝါ 250 Nits
တစ်သက်တာ 50,000-60,000 နာရီ။
ခုနှစ်တွင် / output ကို USB မှတ်, SD ကဒ် slot က, HDMI အတွက်
နာယက 2pcs x ကို 5W
ပံ့ပိုးမှုဖိုင်တွေ Format ကို MP3, MP4, AVI, DivX, H264, RMVB, JPG
OSD ဘာသာစကား multi-တိုင်းပြည်ဘာသာစကားများ (optional)
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ AC အ 100-240V
အလုပ်လုပ်အပူချိန်0° C မှ-50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန် -20, C-60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ
ဆန့်ဘား LCD ကိုမော်နီတာ - နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ
ဒါ့အပြင်က ultra-wide display တွေသို့မဟုတ်ရုံကိုဆန့် display တွေကိုခေါ်, ဤဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်နယ်ပယ်တွင်တစ်ဦးအတော်လေးသစ်ကိုပုံစံရှိပါတယ်။ အဆိုပါ format နဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ထိုကဲ့သို့သောပြဇာတ်ရုံစာတန်းထိုးနဲ့ surtitles, တိမ် menu ကိုပျဉ်ပြားနှင့်ဖန်သားပြင်ပုံတူများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာကျဉ်းမြောင်းသောတိုင်ပေါ်တူသောကျပ်အာကာသနှင့်အတူမည်သည့်အများပြည်သူ display ကိုကာလ၌ရှိသကဲ့သို့အသစ်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုအကွာအဝေးတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ဗီဒီယိုကို MP4, AVI, DivX, VOB, MPG, MPEG, RM, RMOV, DAT, RMOV, HDMOVA စသည်တို့ကို
image ကို JPEG, BMP, GID, PNG
audio MP3, WMA, OGG / AAC / AC3 ​​/ DTS / FLAC အ / ape
ထောကျပံ့ Code ကို Stream မက်စ်ဆုံးဖြတ်ချက် * 1080 1920 60Hz @
မက်စ်သည် frame rate ကို 30frames / s နဲ့
မက်စ်ကုဒ်စီး USB2.0 device ကို: 2MB / s နဲ့
ထောကျပံ့အသံကုဒ်ဖြုတ် နမူနာမှုနှုန်း 32kHz, 44,1 kHz, 48kHz, 96kHz
bit rate ကို 384 kbps မှ 32hbps
1.Payment သက်တမ်း: ထုတ်လုပ်မှုမတိုင်မီ T / T 30% ငွေပေးချေမှု, 70% ချိန်ခွင်လျှာစစ်ဆေးရေးပြီးနောက်တင်ပို့ပေးဆောင်ရပါမည်။
2.Warranty: 12 လအတွင်းအာမခံနှင့်ရာသက်ပန်အချိန်ကိုထိန်းသိမ်းပါ။
3.Certifications: ROHS, အီး & FCC သည်, SAA, ISO9001, IP65 လက်မှတ်များအားလုံးသွားကြပြီ။
4.MOQ: 1pc, နမူနာအလို့ငှာသင့်ရဲ့အကဲဖြတ်များအတွက်ကြိုဆိုကြသည်။
1. သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဈ Reply ဎ 24 အလုပ်လုပ်နေနာရီ။
3. စိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်ရှိနိုင်ပါသည်, OEM & လိမ္မော်ရောင်ကြိုဆိုကြသည်။
LCD ကိုထုတ်ကုန်၏လယ်ပြင်တွင်မြင့်မားအထူးပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု LCD ကိုထုတ်ကုန် 2005 ခုနှစ်ကတည်းကဤနှစ်တာကာလအတွင်းအဲဒီလို LCD ကြော်ငြာကစားသမားထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကို kiosk, ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်တီထွင်ခဲ့ကြပြီ 2005 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး splicing, သင်ကြားမှုစက်, ဒါပေါ်မှာရှိသမျှ-In-One PC ကို, မော်တော်ကားကြော်ငြာကို, WeChat ကြော်ငြာကစားသမားပါ။
ထိုထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်သည့်အမေရိကန်, ဂျပန်, ဥရောပ, အရှေ့တောင်အာရှ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အာဖရိကနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုထုတ်ကုန်ထိုကဲ့သို့သောအဆောက်အအုံများ, စျေးဆိုင်, ဟိုတယ်များ, စူပါမားကက်, မက်ထရိုဘူတာ, ဘတ်စ်ကားဘူတာ, လေဆိပ်, အငှားယာဉ်များ, ဘတ်စ်ကားများနှင့်အခြားပြင်ပဒေသများအဖြစ်ဒေသများအများကြီးအတွက်ကြော်ငြာများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' မျှော်မှန်းချက်ထက်ကျော်လွန်န်ဆောင်မှုများပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Excel နှုန်း-ရောင်းအားန်ဆောင်မှုများနှင့်အပြီး-ရောင်းအားန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးဖောက်သည် '' နှလုံးသားများရရှိခဲ့ပါပြီ။
LCD ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏နည်းပညာအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ရင်ဆိုင်ခြင်း, ငါတို့ growging နှင့်အကျိုးအမြတ်အတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့နှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူဖောက်သည် provideing သည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့အီး / CCC / ROHS / FCC သည် / ISO9001 / IP65 စသည်တို့ကိုလေပြီ
Q: HS Code ကိုသင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်နည်း
ဖြေ 8531200000 LCD ကိုကြော်ငြာကစားသမား (LCD ကိုဗီဒီယိုက display ကို)
ဖြေ SYTON အားလုံးဆိုင်းဘုတ်ကစားသမားတင်ပို့မတိုင်မီပြီးပြည့်စုံသောအခွအေနေ၌ရှိကြ၏အာမခံ QA သို့, QC, အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောဌာနများကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများပြီးဆုံးဖို့ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုအနေဖြင့်မျိုးစုံစမ်းသပ်မှုရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့သည်လည်းသင်တို့ချိန်းချက်သောတတိယပါတီအားဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းလက်ခံပါ။
ဖြေ SYTON လူ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အင်အား majeure အချက် မှလွဲ. သင်၏ဝယ်ယူမှုနေ့စွဲကနေထုတ်ကုန်များအတွက် 1 (တဦးတည်း) နှစ်ကအရည်အသွေးကိုအာမခံချက်ပေးပါသည်။ ပိုကောင်းတဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့, ကစားသမားတွေပုံမှန်အခြေအနေတွေအောက်မှာသုံးပြီးဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ အာမခံကာလစက်အပြင် SYTON ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေးသွားမှာပါ (ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေစွဲချက်, SYTON တာဝန်မခံပါလိမ့်မယ်)
ဖြေကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုအသုံးအနှုန်းများ: T / T, Western Union, Paypal
နမူနာအလို့ငှာ 1): 100% T / T သို့မဟုတ် Western ပြည်ထောင်စုကိုကြိုတင်, Paypal ကိုလည်းလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
2) အမြောက်အများအမိန့်သည်: ကြိုတင်မဲအတွက် 30% သိုက် T / T ရှေ့တော်၌, ထကောက်သို့မဟုတ်တင်ပို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟန်ချက်ညီ။
ယင်းကိုအောက်တွင်၌သင်တို့၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအသေးစိတ် Send, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ " Send " Now!
ယခင်: သတ္တု Case စက်မှု VGA BNC AV စနစ် 17 လက်မ LCD ကို Monitor ထုတ်လုပ်သူ
နောက်တစ်ခု:9လက်မ LCD screen ကို headrest ကြော်ငြာတက္ကစီဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်
ဆန့်ဘား LCD Advertising ကြော်ငြာပြရန်
ultra ပါးလွှာကြော်ငြာဘားသေးငယ်တဲ့ LCD ကိုဆန့ ်. ...
ပူပြင်းတဲ့စီးပွားဖြစ်နယူးက Ultra Wide ကိုဆန့်ဘား LCD ...
ပူပြင်းတဲ့ဘားအမျိုးအစား LCD ကို Di ဆနျ့တနျး 14,9 လက်မရောင်းချခြင်း ...
High Quality 14,9 လက်မအိတ်ဆောင်ဒစ်ဂျစ်တယ် Stretch ...
ဘားအမျိုးအစား L ကိုဆနျ့တနျးအိတ်ဆောင်ဒစ်ဂျစ်တယ် 14,9 လက်မ ...
14,9 လက်မဆန့်ဘားအမျိုးအစား LCD display Touch ကို ...
Touch ကိုမျက်နှာပြင် Interactive မှ Kiosk အ , ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှု Interactive မှ Kiosk အ , Interactive မှ Kiosk အ , အဆောက်အဦးအပြင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်နှစ်ချက် , Touch ကိုမျက်နှာပြင် Kiosk အ, Interactive မှ Touch ကိုမျက်နှာပြင် Kiosk အ ,